ခေတ်ဟောင်းသမိုင်း အသံလှယ် အမည်နာမများ | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Letbadaung Tika
ခေတ်ဟောင်းသမိုင်း အသံလှယ် အမည်နာမများ
ကမန်ပိုက် – ယခု ထိုင်းနိုင်ငံ Kamphaeng Phet မြို့ [ရာဇဝင်သစ်၊ တ၊ စာ ၄၉ အောက်]
ကရနံမတ်ဗြင် – ကာနယ်မက်ဘင်း (Colonel and later Brigadier General Mc Bean)
ကရနံအစ်သမြစ် – ကာနယ်စမစ် (Lieutenant Colonel D.C Smith)
ကရနက် – (အင်္ဂလိပ် Carronade)
ကလေမံဝီလျမ်း (အင်္ဂလိပ်) – ကလီးမင်းဝီလျံ (Dr. Clement Williams)
ကလမ္ဗု – သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘို (Colombo) မြို့တော် [သာသနာ၊ စာ ၆၆]
ကာနက်ပ (အီတလီ) – B. Canepa
ကာနယ်ဂျွန်ဆင် (အင်္ဂလိပ်) – Colonel Johnstone
ကာနယ်ရဇ္ဇင်ဘင်သင်/ကာရနံရဇ္ဇင်ဘင်သင် (အင်္ဂလိပ်) – ကာနယ်ရစ်ချတ်ဘင်ဆင် (Colonel Richard Benson)
ကာမေရာတာ (ပေါ်တူဂီ) – A. J. Camaretta (မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်တွင် ကုလားဝန်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ဖူးသူ)
ကာမိုဒိုလံဘာ (အင်္ဂလိပ်) – ကိုမိုဒိုလင်းဘတ် (Commodore Lambert) [ကုန်းဘောင်၊ တ၊ စာ ၃၀၉]
ကာရနယ်လဘော်ရနီ (အင်္ဂလိပ်) – ကာနယ်ဟင်နရီဘာနေ (Col. Henry Burney) [ကုန်းဘောင်၊ တ၊ စာ ၉၅]
ကာရနယ်လအာရဘတ်ဖိုက် (အင်္ဂလိပ်) – ကာနယ်အယ်လ်ဘတ်ဖိုက် (Col. Albert Fytche)
ကာလာဂရတီ (အာမေနိယံ) – William Calogreedy
ကာလိပတ်စပ် (အင်္ဂလိပ်) – ကာရပိယက် (Karapiet)
ကုရုံဓိတာလိယေ (အီတလီ) – Corona d’ Italia (Order of the Crown of Itlay)
ကူလီကွတ္တား – ကာလကတ္တားမြို့ (Calcutta) [ဓညသစ်၊ စာ ၁၄၉]
ကော်ရံနယ်တိုက်ထီး (အင်္ဂလိပ်) – ကာနယ် တိုက်ဒီး (Col. Tidy) [ကုန်းဘောင်၊ ဒု၊ စာ ၄၀၀]
ကော်လော်နက်ဂျွန်ဆင် (အင်္ဂလိပ်) – Col. Johnstone “ကော်လော်နက်ဂျွန်ဆင် မှတ်သားခဲ့သည့် ၂ နယ်ခြား အမှတ်အသား” [လွှတ်တော်ပု၊ ဒု၊ စာ ၄၂၂]
ကိုမိုတို (အီတလီ) – G. B. Comotto ၊ “ရွှေဘွားတော်မြတ်အောက်တွင် ခံမြို့အလုပ်တော် လုပ်ဆောင် ထမ်းရွက်သူ ကိုမိုတို” [လွှတ်တော်ပု၊ ဒု၊ စာ ၅၄၇]
ကိုမန်ဒါတိုရေဒက်လာကော်ရိုနာဓိတာလိယော (အီတလီ) – Commandatore della Corona d’ Italia (Commander of the Order of the Crown of Italy)
ကိုရင်ဂျီ – အိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေရှိ ကိုရင်ဂါ (Coringa) ဒေသသား [စွယ်တော်၊ ဒု၊ စာ ၁၅၀]
ကိုသတိုမလာဝါ (အင်္ဂလိပ်) – မာလဘာကမ်းခြေ (Coast Malabar) [စွယ်တော်၊ စာ ၁၄၉-၁၅၀]
ကင်မစ္ဆတြီ (အင်္ဂလိပ်) – ဓာတုဗေဒ (Chemistry)
ကင်းကိတ် (အမေရိကန်) – Eugenio Kincaid “အမေရိကံတရားဟောဆရာကိတ်” [လွှတ်တော်ပု၊ ဒု၊ စာ ၅၆၈]
ကောင်ခြားဒိရမြူဇ – Count M. Charls de Remusat
ကောင်ဒီရော်ရွှ (ပြင်သစ်) – Count de Rochechouart
ကောင်းဘက်သလင်း (အင်္ဂလိပ်) – ကောင်းဘင်းတင့် (ခ) (Loard William Bentinck)
ကိဉ္စိပုရမြို့ – အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဒရပ်မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင်လေးဆယ်ကျော်ခန့် အကွာရှိ ကန်စီပူရမ်မြို့ (Kanchipuram)
ကတ္တား (အမေရိကန်) – Oliver T.Cutter
ကပ္ပိတံဇံတာရက် (အင်္ဂလိပ်) – ကပ္ပတိန် ဂျွန်ဒိုင်ယာ (Capt. Ensign Jhon Dyer) [ကုန်းဘောင်၊ ပ၊ စာ ၁၅၈]
ကပ္ပိတံဇွံကေနီ (အင်္ဂလိပ်) – ကပ္ပတိန် ဂျွန်ကင်းနင်း (Capt. John Canning)
ကပ္ပီတန်ကောင်မိုတို (အီတလီ) – ကပ္ပတိန်ကောင်မိုတို (Capt. G. B. Comotto)
ကပ္ပီတန်လောင်း (အင်္ဂလိပ်) – Capt. Longe “ဗန်းမော်မြို့ အရေးပိုင် ကပ္ပီတန်လောင်း” [လွှတ်တော်ပု၊ ပ၊ စာ ၃၇၅-၇]
ကမ္မဒါတိုလဒက်လာကော်ရိုနာဓိတာလိယ (အီတလီ) – Commandatore della Corona d’Italia (Commander of the Order of the Crown of Italy)
ကိုဠ်နိလ်စလေဒင် (အင်္ဂလိပ်) – ကာနယ်စလေဒင် (Col. Sladen)
ကိုဠ်နိလ်ပီချယ် – ကာနယ်ပီလ်ချား (Col. R. H. Pilcher)
ကြာဆည်ဥတည် (တရုတ်) – မန်ချူးဧကရာဇ် ကြားချင့် (Chia Ching 1796-1821)
ကြော့ပွတ် (အင်္ဂလိပ်) – ဂျွန်ခရောဖတ် (John Crawfurd)
ကွတ် (အင်္ဂလိပ်) – Captain Cooke “အင်္ဂလိပ် အရာရှိကွတ်ကို ဗန်းမော်မြို့တွင် ထမ်းရွက်သည်အတွင်း ရွှေထီးသနားတော်ခံစေ” [လွှတ်တော်ပု၊ ဒု၊ စာ ၁၀]
ကွတ်တည်မင်း – သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘိုမြို့ အရှေ့တောင်အရပ်ရှိ Kotte ခေါ် ဇယဝဍ္ဎနမြို့ အစိုးရသောမင်း [စွယ်တော်၊ စာ ၁၃၄၊ ၁၄၁]
ခန်တီမင်း – သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ (Kandy) မြို့ကို အစိုးရသောမင်း [စွယ်တော်၊ စာ ၁၃၁၊ ၂၀၆]
ခပ် – ဟင်နရီဒူစီခတ် (Henry Ducie Chads) [ROB, X, p.106]
ချာရာလက်ပံ (ကသည်း) – ဘာရတ်ရှိုင်း (Bharat Shai) [Meitheis, p.80]
ချင်းလုံဥဒည် (တရုတ်) – မန်ချူးဧကရာဇ် ချိန်းလုံ (Chein Lung 1736-96)
ဂနောင်သတ် (အင်္ဂလိပ်+အိန္ဒိယ) – ကာနယ်သခင်ကြီး (Colonel Sahib) [ROB, X. p. 109]
ဂရုကွန္တာ – ခရစ်နှစ် တစ်ဆယ့်ခြောက်ရာစု နှစ်ဦးမှစ၍ တစ်ဆယ့်ရှစ်ရာစုနှစ်အထိ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း၊ ဒက္ခိဏကုန်ပြင်မြင့်၏ အရှေ့ဘက် ကိုရိုမန်ဒယ် ကမ်းခြေတွင် ထွန်းကားခဲ့သော ဂေါ်ကွန်းဒါး (Golconda) ပြည်ထောင် [ရာဇဝင်သစ်၊ တ၊ စာ ၅၆]
ဂရုဏာဒို (အင်္ဂလိပ်) – ဘုရင်ခံ (Governor) [ROB, III. p. 152]
ဂရံကော်ရဒေါ်နေဒက်လာကော်ရိုနာဓိတာလိယေ (အီတလီ) – Gran Cordone Della Cornona d’Italia (Grand Cordon of the Crown of Italy)
ဂူဇယ် (အင်္ဂလိပ်) – ဟင်နရီဂူဂျာ (Henery Gouger) [ROB, X, p. 106]
ဂေါဝိန္ဒစန္တရ – ကချာရာဇာ Govinda Chadra (1813-13) [E.Frontier, p.30]
ဂေါဟတ္ထိ – အာသံမြို့တော် Gouhati [Assam, p.202]
ဂေါ်တော့ပလ္လင် – ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ရာမူးမြို့၏ တောင်ဘက်ရှိ Ratnapulung မြို့ (မင်းဗာကြီး (၁၅၃၁-၅၃) လက်ထက်တွင် သုဝဏ္ဏမြို့ဟု သမုတ်ခဲ့သည်။ ပထမ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲ ပွဲဦးထွက် တိုက်ပွဲများတွင် မြန်မာတို့ အနိုင်ရရှိသော မြို့တစ်မြို့) [နတ်မောက်၊ စာ ၃၇ နှင့် ဓညသစ်၊ စာ ၁၄၈]
ဂေါ်ရဂေါင် – အာသံမြို့တော် Garhgaon [Assam, p.202]
ဂင်ဇာ (Ganza) – မြန်မာမင်းများလက်ထက်တွင် ငွေကြေးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သော ခဲနှင့်ကြေးနီ သို့မဟုတ် ကြေးဝါ ရောနှောထားသော သတ္တု [ရာဇဝင်သစ်၊ တ၊ စာ ၁၀၁]
ဂမ္ဘီရရှိန် (အိန္ဒိယ) – ဂမ္ဘီရာဆင်း (Gambhir Singh) [ROB, X, p. 106]
ဂျေအက်ကိုလဘက် (အင်္ဂလိပ်) – ဂျေအက်(စ) ကို (လ) ဘက် (J. S. Colbeck)၊ “အင်္ဂလိပ်သာသနာဆရာ ဂျေအက်ကိုလဘက်” [လွှတ်တော်ပု၊ ဒု၊ စာ ၃၁၇]
ဂျိုဆေးကလေး (အီတလီ) – Fr. Giuseppe Enrici [Catholic, p.31]
ဂျိုဆေးကြီး (အီတလီ) – Fr. Giuseppe d’ Amato [Catholic, p.31]
ခေတ်ဟောင်းမြန်မာ့သမိုင်း သုတေသနအဘိဓာန် – ဦးသိန်းလှိုင် (ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ၂၀၀၂ အောက်တိုဘာ) မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
Filed under Dictionary, History
Tagged as Dictionary, History